Imisonto kunye nemisonto
Isinyithi ucingo conductive
Impahla yentsimbi yefayibha
Iikhasethi zeKevlar / iintambo / ityhubhu
Imaski yebacteria kunye neiglavu
Isigqubuthelo sobuso esimalunga ne-antibacterial
ngomphathi ku 19-10-26
Ngaphantsi kwemvelaphi yeCovid 19, abantu kufuneka bazikhusele ngokunxiba imaski yobuso kunye neiglavu. Eyona ndlela isebenzayo kufuneka inxibe iimaski. Siphonononge imaski yobuso yesilivere enokubulala iintsholongwane ezosuleleke ngumatshini wokuphefumla, inokuxhathisa i-99.9% yentsholongwane ye-HIN1. UGqr JinJian Fa ...
I-3LTEX ithathe inxaxheba kwi-Plus kunye nesona siganeko sikhulu kwicandelo lezoKhuseleko, uKhuseleko kunye neMpilo eMsebenzini
ngomphathi ku 19-06-03
Qho ngonyaka, inkampani ye-3ltex izakuthatha inxaxheba kweyona miboniso mikhulu yase China nakwamanye amazwe enxulumene neeteknoloji, ukhuseleko kunye nempilo. Umboniso wezoRhwebo lwaMazwe ngaMazwe kunye neCongress sesona siganeko sikhulu kwicandelo lezoKhuseleko, noKhuseleko kunye neMpilo eWor ...
Inkampani ye-3LTEX ithathe inxaxheba kwi-Techtextile-Leading fair trade fair for the technical textile and nonwovens
Qho ngonyaka, inkampani ye-3ltex izakuthatha inxaxheba kweyona miboniso mikhulu yase China nakwamanye amazwe enxulumene neeteknoloji, ukhuseleko kunye nempilo. I-Techtextil eyona nto ikhokelela kurhwebo lwamazwe aphesheya kwezolukiweyo kunye ne-nonwovens, iya ...
Isitalato i-181 Taihua, Shijiazhuang, Hebei, China